2017 - Xalayaa
Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne – Xalayaa Jaalalaa
29 Dec 2017 Kan maxxanse Naa'ol
Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne. (Maammilaa Keenyarraa) Nageenyii koo isheen onnee koo ishee akka malee sijaalaturra burqitee bakka atii jirtutti siyaa dhaqabuu! Akkam Jirta jaalallee koo Dureessa? Nagaa keetii? Ani waaqaf haa galatu, rokkoo tokkoo hin qabu fayyaa dha. Akkam Ati? Jiruuf...
12 Dec 2017 Kan maxxanse Naa'ol
Waanan godhu wallaale! Mala naa malaa Ganamoo Liibanin jedhama. Kan ani jiraadhu biyya Amerikaa magaalaa Chicago dha. Gidduu kana rakkoo tokkoti na mudatee jira. Rakkoo na mudate kanaaf gorsa akka naaf kennitan fedha. Erga biyya Amerikaa dhufee waggaa 6 ga’eera. Kanin biyya Amerikaa kana dhufes...
Alamuddiin Malamaltummaan Shakkamee Mohammad Alamuddiin dureessa fi abbaa qabeenya beekamaa biyya Itoophiyaa fi Saudi Arabiyaa keessatti kan beekamu guyyaa har'a mana hidhaatti galfameera. Bara kana biyyi Saudi Arabiyaa haaromsa gadii faggeenya gubbaa hamma jalatti haaromsaa jiru. Motiiwwan biyya...
[Oduu Amma Nu Ga’e] Obbo. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi!
30 Oct 2017 Kan maxxanse Naa'ol
Obbo Baqqalaa Garbaa Wabiidhaan Ba'uufi Obbo Baqqalaa Garbaa mirgii wabiidhaan akka gadhiifamu milkiidhaan kabajameera. Abukaatoleen isaanii yeroo dheeradhaaf akka mirgii wabiidhan gadhiifamu milkaa'u baatus har'a manni murtii wabii qarshii kuma 30 akka kaffalamu murteessanii jiru. Seerri biyyyatti...
Oduu Amma Nu Ga’e: Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiisaatiin Aangoo Gadii Lakkisee
07 Oct 2017 Kan maxxanse Naa'ol
Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiidhaan Aaangoo Gadii Lakkisee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Af-yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa guyyaa har'aa hojii isaa gama Federaalatiin fedhiidhaan gadii dhiisuu isaa gaazexaa Addis Standard gabaasaniiru. Maaddiin kun akka jedhuutti Obboo Abbaa Duulaan sababa...
Xalayaa Jaalallee koo Oromiyaadhaaf! Hunda dura, si haa ga'u nagaan koo kan onnnee koo irraa madde Kan jaalalaa fi kan kabajaa. Akkam naaf jirta jaalallee koo? Ani jaalala keef jedhee ergan sirraa adda ba'ee kaasee, ganamaaf galgala waa'ee kee yaaduu, waa'ee kee dhiphachuu, fi waa'ee kee dhukkubsachuu...
Adaada Tiyyarra Jaalalli na Qabe! Maqaan kiyya Liiban Ahimad jedhama. Kaniin dhaladhee guddadhe Oromiyaa godina Baalee aana Gasgar magaala Gasgar jedhamutti dha. Ijoollummaa kiyyarra kaase hamma ofbaruutti magaala Gasgar keessatti maati koo waliin jiraacha ture. Barumsa kiyya kutaa 6ffaa gaafan...